Miaro ny zon’ny vondron’olona vitsy an’isa sy ny niova fananahana ao Pakistan i R Umaima Ahmed · Global Voices teny Malagasy
"Hirika hizarako tantaran'i Pakistan ary ankafizako ny tsiron'ny famoronako [ny GV] !"
Voadika ny 17 Janoary 2021 5:53 GMT
Sary natolotr'i R Umaima Ahmed ary nahazoana alàlana.
Avy any Lahore, Pakistan i R Umaima Ahmed. Roa taona sy tapany izy no nandray anjara tato amin'ny GV ary efa nahavita nanoratra lahatsoratra miisa 40 mahery. Maro samihafa ny lohahevitra nosoratany, anisan'izany ny fiarovana ny fahalalahana maneho hevitra an-jotra, ny zon'ny biby ary ny zon'ny vehivavy anjotra. Amin'ity resadresaka natao tamin'ny alàlan'ny imailaka ity dia milaza amintsika bebe kokoa momba ny nanombohany tato amin'ny GV i R Umaima ary faly ihany koa izy mizara ireo zava-mahaliana ara-kolontsaina sy ny nahandro maro hita any amin'ny tanàndehibe misy azy.
Niasa tontolo andro tao amin'ny The News hita ao amin'ny Sunday aho hatramin'ny volana Novambra, izay nameno ny fotoako. Mandray anjara amin'ny sehatra an-tserasera vitsivitsy aho rehefa avy miasa. Ary vao haingana aho no Mpanara-maso sy Mpamoaka Vaovao ho an'ny Faritra ao amin'ny Digital Rights Foundation Pakistan, sady mpandray anjara fitenenana no mpampiofana ao amin'ny atrikasa. Mahaliana ahy ny olan'ny maha-olombelona, ​​ireo niova fananahana, ireo vitsy an'isa ary ny zon'ny biby.
Na dia ohatra ny milamina sy tsy miteny firy aza no fijery ahy, ireo olona mahalala ahy dia mahita fa sariaka aho ary tsy misalasala izy ireo mizara ny olany amiko.
Lahore no tanàndehibe lehibe indrindra faharoa any Pakistan izay niorina tamin'ny taona 1000 talohan'i JK. Ao no foiben'ny lova ara-kolontsaina ao Pakistan ary misy ny taratra (fitaomana) ara-kolontsaina sy sosialy matanjaka ihany koa. Foiben'ny indostrian'ny famoahan-gazety ao Pakistan ihany koa i Lahore sady foiben'ny sehatry ny haisoratra ao Pakistan.
Foibem-pampianarana lehibe ny tanàndehibe ary misy ireo oniversite sangany ao Pakistan. Ao Lahore no misy ny indostrian'ny sarimihetsik'i Pakistan, Lollywood. Fonenan'ny toerana masina mistika Sufi ihany koa ao an-toerana ary foiben'ny mozika Qawwali.
Ao Lahore no anisan'ny ahitana ny indostrian'ny fizahan-tany lehibe ao Pakistan dia ny Walled City, ireo moskea Badshahi (Mpanjaka) sy Wazir Khan (Minisitra) ary ny an'i Sikh Gurdawara. Misy ny Manda Lahore sy ny Zaridaina Shalimar ihany koa ao Lahore izay samy Harem-bakoka Erantany ao anaty lisitry ny UNESCO.
Mankafy sakafo ny Lahoris, ary ahitana ireo toerana manolotra ireo karaza-nahandro isam-paritra ao an-tanàndehibe na io arakaraka ny vanim-potoana na isan-taona, hatramin'ny sakafo an-dalambe Dhabas (tranokely) ka hatramin'ny ambiansy kintana dimy!
Namana iray mpandray anjara ato amin'ny GV no nampahafantatra ahy an'i Rezwan ary nanomboka tamin'izay no nahafahako nandray anjara.
Manome ahy ny hirika izarana tantara momba an'i Pakistan ny fandraisako anjara ary ankafizako ny tsiron'ny famoronako! Mampifandray ahy amin'ireo mpandray anjara hafa ihany koa izany ary manangana fifandraisana hampitomboana ny fahalalako sy ny fandraketako ny angondrakitra ara-kolontsaina sy ara-tsosialy!
Tamin'ny nampahafantarany ahy ny toerana samihafa ara-kolotsaina any amin'ny toerana hafa eto amin'izao tontolo izao.
Araho ao amin'ny Twitter i R Umaima Ahmed @umaimablogger.